घोराहीमा धारिलो छुराबाट मारिएका घर्ती को हुन?? हत्याको नालिबेली पढ्नुस! – Radio Madi
मँसीर १४, दाङ्ग । रोल्पा निबासी नेपाल मगर संघका पुर्ब केन्द्रीय उपाध्यक्ष नन्दबहादुर घर्ती मगर समुदायमा बौद्धिक ब्यक्तिका रुपमा परिचित रुपमा गनिने ब्यक्ति हुन् । लामो समय शिक्षण पेशामा जोडिनुभएका घर्ती मगर समुदायको उत्थानका लागि संघर्षशील ब्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो ।
शिक्षण पेशासंगै रोल्पामा स्टेशनरी ब्यबसाय गर्नु भएका घर्ती पछिल्लो समयमा शिक्षण पेशा छाडेर घोराहीमा भाडाको घरमा हार्डवेयर पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो । रोल्पाको माडी गाउँपालिका—६ कोर्चाबाङका घर्ती मगरलाई अन्त्यन्त मिजासिलो ब्यक्तिका रुपमा चिनिनुका साथै मगर समुदायलाई एक जुट गराउनका लागि अहोरात्र खटिने ब्यक्तिका रुपमा लिईन्छ । बिशेषगरी दाङमा देखिएको मगर संघको फाटोलाई मिलाउनका लागि घर्तीको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको थियो ।
मगर समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहनु भएका घर्ती मगरको बिहीबार बेलुकी घोराहीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको छ । घर्तीको हत्याप्रति विभिन्न संघसस्था तथा ब्यक्तिहरुले दुख ब्यक्त गरेका छन् । उहाँको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रण लिईसकेको छ ।
>कसरी भयो घर्तिको हत्या?
रोल्पा तालाबाङका अमर खत्रीलाई घर्तीको पसलबाट कारोबार गरेर केही रकम उधारा भएपछि उक्त लेनदेनका क्रममा हत्या भएको दाङ्ग प्रहरीले दाबी गरेको छ । यद्यपी आफन्तजनहरुले यही कारणले मात्रै हत्या नभएको जनाएका छन् ।
घर्तीको पसलमा दुई ब्यक्ती आएका थिए र केही समय पछी ती ब्यक्ती संगै घर्ती पनि बाहिर गएका थिए । त्यसको आधा घण्टापछि मात्रै धारिलो हतियार प्रहार भएको खुलेको छ । हतियार प्रहारबाट गम्भिर घाइते घर्तीको राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
उहाँलाई बिशेषगरी गोरेबहादुर खपांगीको खास पात्रका रुपमा चिनिन्छ । मगर समुदायमा रहेको यही दुई धारका कारण पनि हत्या भएको हुन सक्ने आफन्तहरुको आशंका रहेको छ । घटनाका बारेमा दाङ प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । अहिले मगर संघका सबै जिल्लाहरुमा अधिबेशन चलीरहेका छन् यही धारको पनि केही हात त छैन!! आफन्तले आशंका गरेका छन् ।